W.B. Isgaarsiinta ayaa ku baaqay in dalka la keeno Qad Internet oo Keyd ah - Get Latest News From Horn of Africa
W.B. Isgaarsiinta ayaa ku baaqay in dalka la keeno Qad Internet oo Keyd ah
Mogadishu(AxadleTM)— Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Xukuumadda Soomaaliya Eng. Cabdi Canshuur Xasan ayaa ku baaqay in dalka la keeno Qad Internet oo Keyd ah.
kaddib markii Qadkii Internet-ka Fibre Optic ee la soo marsiinayay Badda hoosteeda uu bishii hore markab jaray, taasoo sababtay Internet la’aan soo wajahday Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Illaa 22 cisho ayuu Internet-ka ka maqnaa Gobolada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, iyadoo maqnaanshaha Internet-ka uu saameyn ku yeeshay dhamaan adeegyadii uu fududeynayay Internet-ka, waxaana dowladdu ay sheegtay in maalin walba la khasaarayay lacago malaayiin dollar ahaa.